ကုမ္ပဏီဆာမိုအာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - ဆာမိုအာတွင် IC
သင်ဆာမိုအာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
● Samoa ဘဏ်စာရင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
● Samoa ကိုဘဏ်စာရင်းဖြင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Samoa ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် Samoa တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ Samoa တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Samoa ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Samoa တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဈေးနှုန်းများကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်
ပြုလုပ်သူသန်းချီသောဆာမိုအာနိုင်ငံသည်ဆာမိုအာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံအတွက်အခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုဖောက်သည်များအားပေးသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Samoa ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa ရှိကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa မှ Free Zone ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုလက်ခံရရှိသည်နှင့် Samoa အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလျှောက်လွှာတင်သည်။
Samoa တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက် Corporate စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်သုံးပစ္စည်းများ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပေးပို့ခြင်း။
သင်၏ဆာမိုအာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်း၌ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Samoa အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa အတွက်ဘဏ်စာရင်း၊ Samoa အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ Samoa အတွက် Virtual နံပါတ်၊ Samoa အတွက် CRM Solutions၊ Samoa အတွက် virtual office၊ Samoa အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် 109 ကိုပြည့်စုံသောစီးပွားရေးအဖြေများပေးသည်။ နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ယနေ့သင်၏ Samoa အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအမည်ရယူပါ။
သင်၏ Samoa နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီအမည်ရှာဖွေပါ
နိဒါန်း Samoa ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း
Samoan ယဉ်ကျေးမှုသည်ပိုလီနီးရှား၏ဘဝအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဂီတ၊ ရွေ့လျားမှုနှင့်အမြင်အာရုံကိုအနုပညာလက်ရာများသည်ပစိဖိတ်ကျွန်းများနှင့်ကမ္ဘာတစ်လွှားတွင်ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ နိုင်ငံ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိပုံများမှာခရီးသွားဖော်များနှင့်အတူပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိသည့်လူစုအုပ်စုများကိုလွှမ်းခြုံထားသောအပူပိုင်းကောင်းကင်တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပစိဖိတ်အသေးစားအလွှာ၏ဘဏ္,ာရေး၊ လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအခက်အခဲများကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြသည်။ Samoa သည်နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ မရင်းနှီးသောသက်ရောက်မှုများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများရရှိပြီးနောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်နယူးဇီလန်မှလွတ်လပ်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်ဓနသဟာယအဖွဲ့မှလူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဆာမိုအာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးသည်စိုက်ပျိုးရေးဈေးနှုန်းများ၊ တိုးတက်မှုအကူအညီနှင့်နိုင်ငံခြားမှပုဂ္ဂလိကအခြေချနေထိုင်မှုများအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တိုင်းပြည်သည်မုန်တိုင်းများကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ပါ။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည်လုပ်သားအင်အား၏ ၆၆% ကိုအသုံးပြုထားပြီးအုန်းသီးမုန့်၊ ကြီးမားသောကားဝါယာကြိုးစက်ရုံအပြင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်သည့်areaရိယာသည်အဓိကအားဖြင့်လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများကိုတိုင်းတာသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်တိုးချဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၇၀,၀၀၀ ကျော်သည်ကျွန်းများသို့လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်။ Samoan အစိုးရသည်ငွေကြေးဆိုင်ရာliberရိယာကိုလွတ်မြောက်ရန်၊ အကျိုးတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနှစ်သိမ့်ရန်နှင့်ဘဏ္controlာရေးထိန်းချုပ်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အကဲခတ်သူများကအလုပ်စျေးကွက်၏အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်မှုကိုအနာဂတ်ငွေကြေးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံအရည်အသွေးတစ်ခုအဖြစ်မီးမောင်းထိုးပြသည်။
နယူးဇီလန်သည်ဆာမိုအာ၏အကြီးအကဲဖြစ်သည့်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလဲလှယ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေရာရာကို ၃၅ ရာနှုန်းနှင့် ၄၀% အထိတင်သွင်းသည်။ သြစတြေးလျ၊ အမေရိကန်ဆာမိုအာ၊ ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့်ဖီဂျီတို့သည်လည်းအလားတူအရေးပါသောအပြန်အလှန်ဖလှယ်ကြသည်။ ၎င်း၏အဓိကသွင်းကုန်များမှာအစားအစာနှင့်အချိုင့်၊ ခေတ်မီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်ဖြည့်တင်းမှုများဖြစ်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော(ရိယာ (ဟော်ရီကာချာ၊ ရိန်းဂျားဝန်ဆောင်မှုနှင့်ငါးဖမ်းခြင်း) သည်လုပ်သားအင်အား၏ ၆၆% ကိုအသုံးချပြီးဂျီဒီပီ၏ ၁၇% ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဆာမိုအာနိုင်ငံ၏အဓိကစျေးနှုန်းမှာအုန်းသီးနှင့်ငါးများဖြစ်သည်။
စက်မှုစွမ်းအားသည်ဂျီဒီပီ၏လေးပုံတစ်ပုံကျော်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အကြီးမားဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းကြိုးပမ်းမှုမှာ Yazaki Samoa ဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျားသို့စျေးကွက် ၀ င်ရန်အစီအစဉ်အရသြစတြေးလျသို့ကားစီးရန်ကားဝါယာကြိုးများကိုပြင်ဆင်ထားသောဂျပန်ပိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ Yazaki စက်ရုံသည်အထူးကျွမ်းကျင်သူ ၂၀၀၀ ကျော်ကိုအသုံးပြုထားပြီးစုစုပေါင်းအထွက်နှုန်း၏ ၂၀% ကိုကျော်စေသည်။ Yazaki မှတင်ပို့မှုကိုအုပ်ချုပ်ရေးများ (ကုန်သွယ်ရေးကိုင်တွယ်ခြင်း) ဟုသတ်မှတ်ထားသည့်ကြားမှအသားတင်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများသည်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၁.၅ သန်းမှ ၃.၀၃ သန်းအကြားတိုးပွားလာသည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအရေအတွက်နှင့်ဝင်ငွေသည်မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်အတွင်းများပြားလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ဆာမိုအာသည် guests ည့်သည် ၁၂၂,၀၀၀ ရရှိခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးareaရိယာသည်ဂျီဒီပီ၏အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုပြီးလုပ်သားအင်အား၏အကြမ်းအားဖြင့် ၃၀% ကိုအသုံးချသည်။
Samoa တွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲစီးပွားရေးအနည်းငယ်ရှိပြီးယေဘုယျအားဖြင့်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခု၏လက်အောက်ခံဖြစ်သည်။ Samoa ၏သိသာထင်ရှားသောလုပ်ငန်းများတွင်လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတို့ပါဝင်သည်။ Samoa ရှိစီးပွားရေးဖွင့်လှစ်မှုများသည်ထိုဒေသများ၌အမှန်တကယ်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါareaရိယာယေဘုယျအားဖြင့်လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများတိုင်းတာသည်။ ဆာမိုအာရှိစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသည်အုန်းသီးမုန့်၊ ကော်ပရေးနှင့်အုန်းဆီဆီတို့ဖြင့်စျေးနှုန်းများ ၉၀% ရှိသည်။ ဆာမိုအာရှိဟော်ရီကာချာသည်လုပ်သားအင်အား၏ ၆၆% ကိုအသုံးချသည်။ အလုပ်စျေးကွက်၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သည်ဆာမိုအာတွင်အနာဂတ်ငွေကြေးတိုးတက်မှုအတွက်အရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Samoa သည်နိုင်ငံ၏ဘဏ္developmentာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအဓိကပံ့ပိုးသူအဖြစ်ရှုမြင်သောစျေးနှုန်းခနှင့်အတူတင်သွင်း / တင်ပို့မှုမညီမျှမှုရှိသည်။ နယူးဇီလန်သည်ဆာမိုအာနိုင်ငံ၏အခြေခံအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုဆိုင်ရာအကြံပေးသူဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကိုဆာမိုအာအစိုးရမှစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ကော်မရှင်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဆာမိုအာနှင့်နယူးဇီလန်တို့အကြားအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုတိုးမြှင့်ရေးကိုအားပေးမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် - ကျွန်ုပ်တို့သည် Samoa ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း၊ Samoa ဘဏ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ Samoa တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့် Samoa တွင်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့အတွက်တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
Samoa ရှိ Company Incorporation ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် Samoa ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးဖြေရှင်းချက်များကိုအဆုံးသတ်ရန်နှင့် Samoa ရှိ virtual office ကိုသင်၏အလုပ်အကိုင်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွမ်းကျင်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီသည်။ ဆာမိုအာတွင်စီးပွားရေး ၀ ယ်ခြင်း၊ ဆာမိုအာတွင် virtual နံပါတ်၊ ဆာမိုအာတွင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်း၊ Samoa ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Samoa ရှိဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ Samoa ရှိစီးပွားရေးတန်ဖိုး၊ Samoa ရှိ CRM Solutions၊ Samoa ကုန်သည်အကောင့်သို့မဟုတ် Samoa ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်, လုပ်အားအရင်းအနှီးငွေကြေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး။ ထို့ကြောင့်ဆာမိုအာတွင် Web development၊ Samoa ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Samoa ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Samoa ရှိ Apps များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Samoa တွင် software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ Samoa ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖော်ပြသည်။
ဆာမိုအာတွင်တည်ထောင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆာမိုအာနိုင်ငံရှိကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးသတ်ဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသောကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကျွမ်းကျင်သည့်လုပ်သားအင်အားစုများကိုဆာမိုအာတွင်ဖြည့်စွက်ရန်သို့မဟုတ်ဆာမိုအာ၌နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီပြုလုပ်ရန်ကူညီသည်။ ဆာမိုအာတွင်စီးပွားရေးရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၊ ဆာမိုအာနိုင်ငံရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆာမိုအာနိုင်ငံရှိ virtual နံပါတ်များ၊ ဆာမိုအာနိုင်ငံရှိနိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဆာမိုအာနိုင်ငံရှိတရား ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆာမိုအာနိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ Samoa ရှိဘဏ္consultာရေးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း၊ Samoa ရှိ CRM Solutions၊ Merchant account နှင့် payment gateway ဆာမိုအာတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဆာမိုအာတွင်အရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဆာမိုအာတွင်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာမှုရှိခြင်း၊ ဆာမိုအာတွင်ရှိသောအိုင်တီဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများ၊ ဆာမိုအာတွင်အီလက်ထရောနစ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဆာမိုအာနိုင်ငံရှိအက်ပလီကေးရှင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများမှာအနည်းငယ်ဖော်ပြရန်နှင့် Samoa အတွက် Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
ဆာမိုအာအတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဆာမိုအာအတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာဆာမိုအာနဲ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ယောက်မှတောင်မှကမ်းလှမ်းထားသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ယောက်လို့ပြောရင်မှန်တယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုကူညီသည်။ စီးပွားရေးအရအကြီးစားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။ WE Samoa အတွက်အဖြေရှာပေးသူများပါတယ်။
Samoa ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Samoa ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကသင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆာမိုအာ (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဆာမိုအာ (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆာမိုအာ
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဆာမိုအာ
Samoa စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
Samoa ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
Logo ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း Samoa
Samoa ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
Samoa စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ Apostille
Samoa Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်သံရုံးမှတရားဝင်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ Samop အတွက် Chop and Seal
●အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဆာမိုအာ (၁ နှစ်) အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်ခ - $ 1
●ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့် ၀ န်ဆောင်ခခ - $
●အမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ဆာမိုအာမြို့ရှိကုမ္ပဏီ TYPE ၁ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားအမည် ၃ ခုပေးပါ)
● Samoa ရှိ International Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
● Samoa ရှိ International Company အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့လိပ်စာကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ပေးရမယ်
● Samoa ရှိ International Company အတွက်သင့်အတွက်စံသတ်မှတ်ထားသည့်ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းအောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။ စာချွန်လွှာနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရှယ်ယာလက်မှတ်၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊
Samoa တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်ဒေသတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံပေးသည်။ သင် Samoa သို့မဟုတ်စီးပွားရေး ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးစတင်ချင်လျှင်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဆာမိုအာအတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Samoa ၌ Million Makers မှတဆင့်
သငျသညျဆာမိုအာ၌ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ချင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကို Samoa အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Samoa ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ဘက်မလိုက်သတင်းအချက်အလက်ကိုငါပေးမည်။ Samoa ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ဆာမိုအာတွင်ကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် Samoa ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ Samoa ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် Samoa အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအနေဖြင့် Samoa တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်သင်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီများအတွက် Samoa မှကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လိုအပ်ပါကကူညီလိမ့်မည်။ ငါတို့မှတစ်ဆင့်ဆာမိုအာ။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဆာမိုအာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည်၊ သင်နှင့်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအတွက်ဆာမိုအာအတွက်ပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုအထောက်အထားများကိုသင်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်လျှောက်ထားလိုပါက Samoa အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သောကျွမ်းကျင်မှုများပါဝင်သည်။ အဘို့ ဆာမိုအာနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Samoa ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် Samoa ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ ဆာမိုအာ ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် ဆာမိုအာ.
ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များနှင့် Samoa ရှိသင့်အားအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးများနှင့် Samoa ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်များနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အရေးပါမှုသည် Samoa ရှိကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုကြောင့် Samoa တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနည်းလမ်းကိုပေးသည်။
Samoa ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - Samoa တွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Samion အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှပင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့ Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Samoa နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစမှအဆုံးတိုင်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား“ စီးပွားရေး၏” ကြောင့်ပြောခြင်းသည်မှန်ကန်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ Samoa ရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
WE Samoa အတွက်အဖြေရှာပေးသူများပါတယ်။
Samoa ရှိ ICS / International ကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် -
ကုမ္ပဏီအမည်အမည်ဟာဆာမိုအာကို Registry ထဲမှာရှာပါ။
Samoa အတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
ဆာမိုအာရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများအတွက်အက်ဆေး (IC) အတွက်ဆာမိုအာတွင်စာရင်းစာအုပ်။
Samoa တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Samoa / IC တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလက်မှတ်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ Samoa ရှိ Samoa / IC ရှိ International Company ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက။
မှတ်ပုံတင်ရုံး။ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက Samoa ရှိ International Company / Samoa ရှိ IC ကုမ္ပဏီ။
ဆာမိုအာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ / ဆာမိုအာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ Samoa ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ / ဆာမိုအာရှိ IC:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သငျသညျ Samoa အတွက်လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိဘဲလှုပ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကခွင့်ပြုပေး Samoa အတွက်ခွင့်ပြုချက်ကိုပြုလျှင်, Million Makers မှာငါတို့လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သော Samoa အတွက်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်န်ဆောင်မှုနှင့်အတူသင့်ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ မဲဆန္ဒပေးခြင်းများ၊ ဆာမိုအာတွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ ဆာမိုအာနိုင်ငံရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဆာမိုအာရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္oaာရေးနှင့်ကုန်စည်အခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်အခြားဆာမိုအာရှိအခြားငွေချေးစာချုပ်များ၊ Samoa တွင်အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Samoa ရှိလုံခြုံသောထိန်းသိမ်းထားခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ။
သင်ဆာမိုအာတွင် Crytocurrency လိုင်စင်လိုင်စင်ချပေးရန်အကူအညီလိုပါက၊ ဆာမိုအာရှိ Forex အကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဆာမိုအာနှင့် "၁၀၉ နိုင်ငံအပါအ ၀ င်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပြည်နယ် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
သန်းနှင့်ချီသောထုတ်လုပ်သူများသည် Samoa တွင်သာမကနိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် Samoa ရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ Samoa ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Samoa ရှိအခွန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကြီးမားသောအစုစုကိုစီမံသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆာမိုအာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆာမိုအာနှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတို့၏ကုမ္ပဏီများနှင့်ဖောက်သည်များအားကူညီသည်။
Samoa ရှိ Corporate Services | Apia အတွက် Corporate န်ဆောင်မှု
Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Samoa ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ၊ Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Samoa ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Samoa ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ, Samoa ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Samoa ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Samoa, ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ Samoa ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Samoa ရှိကော်ပိုရိတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်, Samoa ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Samoa ရှိ Corporate service များအတွက် Samoa ရှိ Corporate consultants
Samoa ရှိကုမ္ပဏီအတိုင်ပင်ခံ | Apia အတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
Samoa နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
Samoa တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် Samoa တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပါ။
သင်၏ကုမ္ပဏီဆာမိုအာတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် ဆာမိုအာ.
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင်ဆာဆိုဝါ၌အပ်နှင်းထားပြီးသင်အပြင်သို့သင်အပ်နိုင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဆာမိုအာ
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝယ်ယူပါ Samoa တွင်ကုမ္ပဏီ၏စတော့ရှယ်ယာများဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ် Samoa တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ခြင်းဖြင့်။
HR အတိုင်ပင်ခံ ဆာမိုအာတွင်ပေးအပ်ထားသည်မှာသင်၏ ၀ န်ထုပ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆာမိုအာတွင်လူသစ်စုဆောင်းခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ဆာမိုအာတွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ ဆာမိုအာနှင့်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၇ နိုင်ငံမှာ“အသက်ကော်ပိုရေးရှင်း"Samoa ၌တည်၏
ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ဆာမိုအာ.
ဆာမိုအာတွင် cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုများအတွက်ဆာမိုအာကနေ။
ဆာမိုအာတွင် CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ Samoa ရှိသင့်ဖောက်သည်များ၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကူညီသည်။
Virtual Number - ဆာမိုအာအတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Samoa ရှိ Business VoIP အပါအဝင် Samoa ရှိအခြားသော VoIP ဖြေရှင်းချက်များ။ Samoa ရှိလူနေအိမ် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောဆာမိုအာနိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည်
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ဆာမိုအာ ဆာမိုအာတွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆာမိုအာ, Samoa ရှိ CryptoCurrency Software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Samoa ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
စျေးနှုန်းချိုသာသောဆော့ဝဲလ်ကုမ္ပဏီ Samoa ရှိစျေးသက်သာအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဆာမိုအာတွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုနှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ဆာမိုအာသီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်ရှာဖွေနေသည့်တစ် ဦး ချင်းစီ၊ ဆာမိုအာရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတည်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်သည့်အရာများအကြောင်းရိုးသားစွာဖြင့်သူတို့၏ဆာမိုအာ၌ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆာမိုအာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဆာမိုအာနိုင်ငံရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆာမိုအာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၊ ဆာမိုအာနိုင်ငံရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Samoa အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Samoa ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။
ဆာမိုအာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ပံ့သည် ဆာမိုအာတွင် IC ပါဝင်မှု | ဆာမိုအာတွင် LLC ပါဝင်ခြင်း ဆာမိုအာတွင် IBC ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆာမိုအာတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဆာမိုအာတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဆာမိုအာတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆာမိုအာတွင် IC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းဆာမိုအာတွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa တွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa ရှိကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa ရှိကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa တွင်ကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်၊ , Samoa IC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Samoa IC ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa ကမ်းလွန် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa ကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆာမိုအာတွင် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ဆာမိုအာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆာမိုအာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဆာမိုအာရှိကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa တွင်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Samoa တွင်ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်, , Samoa LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Samoa LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa ကမ်းလွန် LLC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa ကမ်းလွန် LLC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆာမိုအာတွင် IBC ဖွဲ့စည်းမှုရှိနိုင်ငံခြားသားများကိုလည်းဆာမိုအာတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa ရှိ IBC မှတ်ပုံတင်၊ Samoa တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , Samoa IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Samoa IBC မှတ်ပုံတင်, Samoa ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆာမိုအာတွင် LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ဆာမိုအာတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa တွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa ရှိ Offshore LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa ရှိ Offshore LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Samoa LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Samoa LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Samoa Offshore LLC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa Offshore LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆာမိုအာတွင် IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ သူသည်ဆာမိုအာတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa ရှိ IBC ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa ရှိ IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆာမိုအာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆာမိုအာအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆာမိုအာအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆာမိုအာအိုင်ဘီဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆာမိုအာကမ်းလွန်အိုင်ဘီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆာမိုအာကမ်းလွန် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဆာမိုအာတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံခြားသားများကိုဆာမိုအာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ၊ ဆာမိုအာတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ၊ ဆာမိုအာရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဆမိုအာရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ Samoa တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Samoa စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Samoa ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Samoa ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကိုဆာမိုအာတွင်မှတ်ပုံတင်ပါ IC ကို Samoa တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ LLC ကို Samoa တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ IBC ကို Samoa တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ဆာမိုအာတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ ဆာမိုအာတွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုမှတ်ပုံတင်ပါ Samoa တွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ - ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုထောက်ပံ့သည်။ ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့သည် Samoa မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Samoa မှ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Samoa မှကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆာမိုအာတွင်ထောက်ခံမှုများမှာ - Apia တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း, Apia တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ Apia မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ Apia မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း, Apia မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
Samoa တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | Apia အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
Samoa ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းသည် Samoa ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ထောက်ခံမှုဖြင့် Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအေးဂျင့်များနှင့် Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြင့်အောင်မြင်သည်။ Apia ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအေးဂျင့်များဖြစ်သော Apia ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ၏ထောက်ပံ့မှုဖြင့်အောင်မြင်သည်။ , Apia ရှိ Apia ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Apia ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ Apia ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ Apia ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
ဆာမိုအာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ Apia တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအေးဂျင့်များ
သင် Samoa အတွက်တတ်နိုင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှုပေးပါသလား
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ဟာဆာမိုအာမှာစျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆမိုမိုရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်း Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးပါတယ်။ Apia ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ Apia ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Apia ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Apia ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ Apia ရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု
ဆာမိုအာတွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Apia တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်း
သင်ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ Samoa တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Samoa ရှိကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Samoa တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Apia တွင် Apia တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ။ Apia တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ။ Apia တွင်လုပ်ပါ။
တန်ဖိုးနည်းကုန်ကျစရိတ်ရှိသောကုမ္ပဏီများဆာမိုအာတွင် ၀ န်ဆောင်မှု Apia တွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရရှိသည်
ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆာမိုအာနိုင်ငံရှိနိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဆာမိုအာတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားအကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ Apia ရှိနိုင်ငံခြားသားအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ ဘဏ်အကောင့်ရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက် Apia တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Samoa | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Apia
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Samoa တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Samoa တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ် Samoa တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ, Samoa တွင်မှတ်ပုံတင်အခကြေးငွေ Samoa တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ် Samoa ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ် Samoa အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းကုန်ကျကုန်ကျစရိတ် Samoa, ကုမ္ပဏီ setup ကုန်ကျကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီကုန်ကျစရိတ်ဆာမိုအာတွင်ကုန်ကျသည်။
စျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး Apia ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး
ဆာမိုအာတွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) ဆာမိုအာတွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့တည်ထောင်မည်နည်း။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆာမိုအာတွင်ထည့်သွင်းပါ Apia အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုထည့်သွင်း
သငျသညျ Samoa အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူထောက်ခံနိုင်သလား ဆာမိုအာတွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆာမိုအာတွင် LLC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆာမိုအာတွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆာမိုအာတွင် LLC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆာမိုအာတွင် IBC ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆာမိုအာတွင်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဆာမိုအာတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ IC ကိုဆာမိုအာတွင်ထည့်သွင်းပါ ဆာမိုအာတွင်ထည့်သွင်း LLC IBC ကိုဆာမိုအာတွင်ထည့်သွင်းပါ ဆာမိုအာတွင်ပါဝင်သည့် LLC ကုမ္ပဏီ ဆာမိုအာတွင် IBC ကုမ္ပဏီကိုထည့်သွင်းပါ ဆာမိုအာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထည့်သွင်းပါ
Samoa ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ Samoa ရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ဆာမိုအာတွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီကုမ္မဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆာမိုအာတွင်အဘယ်ကြောင့်သို့မဟုတ်ဆာမိုအာ၌ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအဘယ်ကြောင့်သုံးရမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Samoa ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုထူးချွန်မှုများစွာကိုထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာမိုအာတွင်ရှိသောကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းအင်းများပြားလှသောပမာဏနှင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကြောင့် Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှပေးသည်။ Samoa တွင်နှင့် Samoa ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံကို Samoa ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Samoa ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ Samoa တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများမဟုတ်သောနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဆာမိုအာတွင်အထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Apoa တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နေထိုင်သူများမဟုတ်သူများနှင့် Samoa တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထူးအထောက်အပံ့ပေးသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတ ဦး ဖြစ်ပြီးဆာမိုအာမှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
သင်ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဆာမိုအာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်။ Samoa တွင်လည်း Apia တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ Apia တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ် Apia တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ် Apia တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ် Apia တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်ရန်၊ Apia တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ Apia ။
Samoa တွင်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု Apia တွင်စျေးအသက်သာဆုံးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ငါးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန (MAF) Website
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့်အလုပ်သမား ၀ န်ကြီးဌာန (MCIL) Website
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာန (MCIT) Website
ပညာရေး၊ အားကစားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန (MESC) Website
ဘဏ္ofာရေးဝန်ကြီးဌာန (MOF) Website
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန (MOH) Website
တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့်တရားရုံးများအုပ်ချုပ်ရေး (MJCA) Website
သဘာဝသယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဌာန (MNRE) Website
ရဲ ၀ န်ကြီးဌာန (MOP) Website
၀ န်ကြီးချုပ်နှင့်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ ၀ န်ကြီးဌာန (MPMC) Website
ပြည်သူပိုင်လုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာန (MPE) Website
အခွန်ဝန်ကြီးဌာန (MOR) Website
အမျိုးသမီး ၀ န်ကြီးဌာန၊ လူထုနှင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန (MWCSD) Website
အလုပ်သမား၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာန (MWTI) Website
မတော်တဆထိခိုက်မှုလျော်ကြေးကော်ပိုရေးရှင်း (ACC) Website
လျှပ်စစ်စွမ်းအားကော်ပိုရေးရှင်း (EPC) Website
Samoa မီးဘေးနှင့်အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများအာဏာပိုင် (SFESA)Website
Samoa အိမ်ရာကော်ပိုရေးရှင်း (SHC)Website
Samoa အသက်အာမခံကော်ပိုရေးရှင်း (SLAC)Website
Samoa Post လီမိတက် (SPL)Website
Samoa အရည်အချင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (SQA)Website
Samoa သင်္ဘောလုပ်ငန်း (SSS)Website
Samoa Trust Estates ကော်ပိုရေးရှင်း (STEC)
Samoa ရေအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (SWA)Website
Samoa စာရင်းစစ်ရုံး Website
ဥပဒေပြုလွှတ်တော်၏ ဦး စီးဌာန Website
Ombudsman ရုံး Website
ANZ BANK (SAMOA), LTD
တောင်ပိုင်းပစိဖိတ်ဘဏ် (Samoa) LIMITED
ဗြိတိသျှအမေရိကန်တာဘိုကာ (ဆာမိုအာ) လီမိတက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးဘဏ် BANK CORPORATION LTD ။
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဆာမိုအာရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုလုံး ၀ ဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ခံပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ ဆာမိုအာ အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဆာမိုအာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူတွေ၊ လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
●ဆာမိုအာအတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများသိုလှောင်ခြင်း၊
● Samoa အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကို Samoa ဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းဝင်ထားတဲ့တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းစီကိုမထောက်ပံ့ပေးပါဘူး။
●ဆာမိုအာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆမိုမာတွင်သို့မဟုတ်၎င်းမှသို့မဟုတ်သို့မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဆာမိုအာအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်သို့မဟုတ်ဆာမိုအာတွင်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများကိုနျူးကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင်နျူကလီးယားပစ္စည်းများရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ဆာမိုအာအတွက်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်မှုပြုသည့်ဆာမိုအာတွင်ရှိသို့မဟုတ်သို့မသွားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဆာမိုအာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာအေဂျင်စီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမခံရပဲ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) Samoa တွင်သို့မဟုတ်၎င်းမှသို့မဟုတ်သို့လူ့အခွင့်အရေးအလွဲသုံးစားမှုများအပါအ ၀ င်။
●ဆာမိုအာအဘို့ကုမ္ပဏီ၏ပူးပေါင်းပါဝင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုဆာမိုအာတွင်သို့မဟုတ်၎င်းမှသို့မဟုတ်သို့မသွားနိုင်ပါ။
●ဆာမိုအာအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုလူတစ် ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအခြေခံရုပ်ပုံများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမပြုပါ။
●ဆာမိုအာအတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆာမိုအာမှာရှိ၊ သို့မဟုတ်သို့ဖြစ်စေပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဆာမိုအာအတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေဟာမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဆာမိုအာဒါမှမဟုတ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် ဆာမိုအာတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဆာမိုအာ, ဆာမိုအာ ဘဏ်အကောင့်, ဆာမိုအာ ယုံကြည်မှု ဆာမိုအာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဆာမိုအာ။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ဆာမိုအာအဘို့
အသုံးပြုသူက https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-samoa/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
အသုံးပြုသူသည်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-samoa/ မှလာသည်။
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-samoa/